नेपाल चिकित्सक संघ कोशीको अध्यक्षमा डा. सिलवाल निर्वाचित - Birat Times
विराटनगर, ६ माघ । नेपाल चिकित्सक संघ कोशीको अध्यक्षमा डा. फरवार्ड सिलवाल निर्वाचित भएका छन् । सिलवालले ३ सय ६१ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
सिलवालले प्रतिस्पर्धी डा. कैलाश श्रेष्ठलाई ९० मत अन्तरले पराजित गरे । संघमा श्रेष्ठ समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र एकजना सदस्य गरी तीनजनाबाहेक सबै पदमा सिलवालको समूह निर्वाचित भएका छन् । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहबाट डा. सन्जिबकुमार ठाकुरले ३ सय १८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी डा. नविन कर्णले ३ सय २ मत प्राप्त गरे ।
उपाध्यक्षमा डा. बालकृष्ण साहलाई २५ मत अन्तरले हराउँदै डा. यज्ञराज खरेल निर्वाचित भए । खरेलले ३ सय २२ मत प्राप्त गर्दा साहले २ सय ९७ मत ल्याए । महासचिवमा डा. राजेन्द्र चौधरी निर्वाचित भए ।
चौधरीले ३ सय ५१ मत ल्याएर विजयी हुँदा डा. रविराज सिंहले २ सय ७५ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा डा. सुधिर श्रेष्ठले ३ सय १० मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी सिलवन्त सेन श्रीवास्तवे ३ सय ६ मत ल्याए ।
सहकोषाध्यक्षमा डा. जुबिन सिलवालले ३ सय ८० मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी डा. सरवेस कुमार झाले २ सय ४८ मत प्राप्त गर्नुभयो । सहसचिवमा सुनिल रेग्मीले ३ सय ६८ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो । उनका प्रतिस्पर्धी २ सय ५९ मत ल्याए । सदस्यहरूमा डा. रोशन खड्का, डा. अमरकुमार यादव, डा. अरबेन्द्रकुमार महतो, डा. अन्जु देव, डा. पार्थ गुरागाई र प्रेरणा दाहाल विजयी हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
यसरी ब्युँतियो विराटनगरमा नेकपा (एमाले) मोरङको पार्टी कार्यालय